အနှိုင်းမဲ့အကြင်နာပရဟိတသမား ကိုအောင်၏ အချစ်တော် မိကောင်းမအပါဝင် ဝက်ဝံလေး(၅)ကောင်ကို ယနေ့ နေပြည်တော်တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ ပို့ဆောင် - Barnyar Barnyar
April 12, 2022 linn htet news 0
မိကောငျးမအပါဝငျ ဝကျဝံလေး(၅)ကောငျကို ယနေ့ နပွေညျတျောတိရစ်ဆာနျဥယြာဉျသို့ ပို့ဆောငျ
အနှိုငျးမဲ့အကွငျနာပရဟိတသမား ကိုအောငျ၏ အခဈြတျော မိကောငျးမအပါဝငျ ဝကျဝံလေး(၅)ကောငျကို ယနေ့ နပွေညျတျောတိရစ်ဆာနျဥယြာဉျသို့ ပို့ဆောငျ
တောငျငူမွို့၌ ကှယျလှနျသူ ကိုအောငျ(မွငျ့မိုရျနနျး)၏ ကနျြရဈသော ဝကျဝံမြားဖွဈကွသညျ့ ကှယျလှနျသူ၏ အခဈြတျော ဝကျဝံမိကောငျးမ အပါဝငျ ဝကျဝံလေး (၅) ကောငျကို ဧပွီ ၁၂ ရကျနေ့ (အင်ျဂါနေ့)မှာ နပွေညျတျောရှိ တိရစ်ဆာနျဥယြာဉျသို့ ပို့ဆောငျကွောငျး သိရပါသညျ။
ဝကျဝံလေးတှကေို တောထဲပွနျမလှတျဘဲ အထူးအခှငျ့‌ရေးပေး၍ နပွေညျတျော တိရစ်ဆာနျဥယြာဉျအတှငျး ထားခှငျ့ပွုပေးခွငျးဖွဈကွောငျးကို ကှယျလှနျသူ အနှိုငျးမဲ့အကွငျနာပရဟိတသမား ကိုအောငျ (မွငျ့မိုရျနနျး)၏ ဝကျဝံလေးမြားအရေးကို ကူညီဆောငျရှကျပေးနသေူ ကိုဇျော -၁၁၅ မိုငျ ( Zaw Hla Myint ဖစျေ့ဘုတျချ အကောငျပိုငျရှငျ) ၏ အကောငျ့ ဖစျေ့ဘုတျချစာမကျြနှာ၌ ရေးသားထားခွငျးကွောငျ့ သိရပါသညျ။
ကိုအောငျရေ… ခငျဗြားအိမျမှာကနျြခဲ့တဲ့ ခငျဗြားအခဈြတျော မိကောငျးမ အပါဝငျ ဝကျဝံလေး (၅)ကောငျကို မနကျဖနျ (၁၂.၄.၂၀၂၂) အင်ျဂါနမှေ့ာ စနဈတကနြဲ့ နရောသဈဖွဈတဲ့ နပွေညျတျော တိရစ်ဆာနျဥယြာဉျကို အဆငျပွစှော ရောကျရှိရေးနဲ့ ကောငျးမှနျစှာ နထေိုငျနိုငျဖို့အတှကျ ပွောငျးရှကေု့နျကစြရိတျအားလုံး ကြုပျတာဝနျယူ ပေးထားတယျ။
ကြုပျအခုလို စိတျအားထကျသနျစှာကူညီပေးနတောက ခငျဗြားရဲ့အနှိုငျးမဲ့အကွငျနာတရားကွောငျ့ပဲ….
ကလေးတှကေို တောထဲပွနျမလှတျပဲ အထူးအခှငျ့‌ရေးပေးပွီး နပွေညျတျော တိရစ်ဆာနျဥယြာဉျအတှငျး ထားခှငျ့ပွုပေးတဲ့ တာဝနျရှိသူအားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးပါ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ ကြုပျ ကလေးတှကေို ပွနျချေါခှငျ့ မရခဲ့ပမေဲ့ ကယျြကယျြ ဝနျးဝနျးရှိတဲ့ နပွေညျတျော တိရစ်ဆာနျ ဥယြာဉျကွီးထဲမှာ သူတို့လေးတှေ လှတျလှတျ လပျလပျ ပြျောရှငျနကွေမှာတော့ အမှနျပဲဗြ။
ခငျဗြားတမလှနျကနေ ကွညျ့ပွီး ကွညျနူးနိုငျပါစဗြော။
Credit photo and content
တောင်ငူမြို့၌ ကွယ်လွန်သူ ကိုအောင်(မြင့်မိုရ်နန်း)၏ ကျန်ရစ်သော ဝက်ဝံများဖြစ်ကြသည့် ကွယ်လွန်သူ၏ အချစ်တော် ဝက်ဝံမိကောင်းမ အပါဝင် ဝက်ဝံလေး (၅) ကောင်ကို ဧပြီ ၁၂ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့)မှာ နေပြည်တော်ရှိ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်သို့ ပို့ဆောင်ကြောင်း သိရပါသည်။
ဝက်ဝံလေးတွေကို တောထဲပြန်မလွှတ်ဘဲ အထူးအခွင့်‌ရေးပေး၍ နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်း ထားခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို ကွယ်လွန်သူ အနှိုင်းမဲ့အကြင်နာပရဟိတသမား ကိုအောင် (မြင့်မိုရ်နန်း)၏ ဝက်ဝံလေးများအရေးကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ကိုဇော် -၁၁၅ မိုင် ( Zaw Hla Myint ဖေ့စ်ဘုတ်ခ် အကောင်ပိုင်ရှင်) ၏ အကောင့် ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာ၌ ရေးသားထားခြင်းကြောင့် သိရပါသည်။
ကိုအောင်ရေ… ခင်ဗျားအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားအချစ်တော် မိကောင်းမ အပါဝင် ဝက်ဝံလေး (၅)ကောင်ကို မနက်ဖန် (၁၂.၄.၂၀၂၂) အင်္ဂါနေ့မှာ စနစ်တကျနဲ့ နေရာသစ်ဖြစ်တဲ့ နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကို အဆင်ပြေစွာ ရောက်ရှိရေးနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် ပြောင်းရွှေ့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံး ကျုပ်တာဝန်ယူ ပေးထားတယ်။
ကျုပ်အခုလို စိတ်အားထက်သန်စွာကူညီပေးနေတာက ခင်ဗျားရဲ့အနှိုင်းမဲ့အကြင်နာတရားကြောင့်ပဲ….
ကလေးတွေကို တောထဲပြန်မလွှတ်ပဲ အထူးအခွင့်‌ရေးပေးပြီး နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်း ထားခွင့်ပြုပေးတဲ့ တာဝန်ရှိသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးပါ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကျုပ် ကလေးတွေကို ပြန်ခေါ်ခွင့် မရခဲ့ပေမဲ့ ကျယ်ကျယ် ဝန်းဝန်းရှိတဲ့ နေပြည်တော် တိရစ္ဆာန် ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ သူတို့လေးတွေ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ပျော်ရွှင်နေကြမှာတော့ အမှန်ပဲဗျ။
ခင်ဗျားတမလွန်ကနေ ကြည့်ပြီး ကြည်နူးနိုင်ပါစေဗျာ။
အမျိုးသားတစ်ဦးလို နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာအောင် ဟန်ဆောင်ပြီးနေခဲ့သော မိခင်တစ်ဦးရဲ့ ရင်နာဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်
ကျေးရွာမြေတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ထားရမလဲ…